सुत्नु अघी श्री पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै भोली भाद्र ८ गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस ,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस ! – Khabar PatrikaNp
सुत्नु अघी श्री पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै भोली भाद्र ८ गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस ,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस !
वि.सं.२०७७ भदौ ८ गते सोमबार , तदनुसार ई.सं.२४ अगष्ट २०२०,
माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। पदोन्न्ति हुने सँकेत रहेको छ। बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला बोलि ले काम बिग्रिन सक्छ। आफन्तको साथ मिल्नेछ।
आर्थिक लाभ हुने छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। मेलमिलाप हुनेछ। अरुको निर्णयमा नहिड्नु होला। नया काम को सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। आकस्मिक लाभको योग छ। मन मा सन्तुष्टि रहने छ। आजको उधारो महँगो पर्ने छ।
नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। साथीभाइले धोका दिन सक्छन,। अरुको बिस्वास नगर्नु होला ,बन्न लागेको काम पनि नबन्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। आटेको काम पुरा हुनेछ। भेटघाट हुने योग छ।मन खुसि हुने छ।
नया काम को सुरुवात नगर्नु होला।माया प्रेम र पारिवारिक जीवनमा खट्पट हुन सक्छ ।बिवाद सिर्जना हुने छ। साथीभाइले धोका दिन सक्छन । धर्म कर्ममा मन जानेछ ।
बोलि ले साथ दिने छ।शारिरिक र मानसिक मजबुति मिल्ने छ। जस मिल्ने योग छ।पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। सम्मानित हुँने योग रहेकोछ । दिन शुभ छ। सोचेको काम पुग्ने छ।
प्रिय मान्छे को भेट हुने योग रहेकोछ ।धर्म कर्ममा मन जानेछ ।नया काम को थालनि गर्दा धेरै राम्रो नाफा मिल्ने छ। आटेको काम पुरा हुनेछ। पदोन्न्ति हुने सँकेत रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ।
जस मिल्ने योग छ।मेलमिलाप हुनेछ। मन मा सन्तुष्टि रहने छ। इज्ज्त बड्ने योग रहेकोछ । पारिवारिक जीवनमा मिठासपन आउने छ। नया काम को थालनि गर्दा धेरै राम्रो नाफा मिल्ने छ।
पारिवारिक जीवनमा मिठासपन आउने छ तर साथीभाइले धोका दिन सक्छन । बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला बोलि ले काम बिग्रिन सक्छ। नया काम को सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। किनमेल नगर्नु हो्ला।
लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। पदोन्न्ति हुने सँकेत रहेको छ। रमाइलो यात्राको योग छ।
सोचेको काम बन्ने छ । नया काम को सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। माया प्रेमको बन्धनमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।सम्पति लाभ हुने योग छ। लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। नबनेको काम पनि बन्न सक्छ । शुभ खबर सुन्ने योग छ।
भाग्य बढ्ने छ। शारिरिक र मानसिक मजबुति मिल्ने छ। बोलि ले साथ दिने छ।शारिरिक र मानसिक मजबुति मिल्ने छ। जस मिल्ने योग छ।पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ।सम्मानित हुँने योग रहेकोछ ।
शुख मा कमि हुने छ। बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला बोलि ले काम बिग्रिन सक्छ। मन मा सन्तुष्टि रहने छ। इज्ज्त बड्ने योग रहेकोछ । मौका फुत्कन सक्छ। चनाखो रहनु हो्ला।
Prevइच्छाधारी नागिन को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस भोलिको राशिफल हेरनुहोस
Nextइच्छाधारी नागिन को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस भोलिको राशिफल हेरनुहोस
पोखरामा प्रहरी जवानमा कोरोना पुष्टि
हिन्दु धर्ममा ॐ महामन्त्र हो ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला पढेर शिव भगवानको दर्शन गरौ
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६२६ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29565)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28150)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27802)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24585)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22104)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20887)